Xeer Ilaaliyaha Guud ee dowladda Soomaaliya oo Gaaray Dalka Holland – STAR FM SOMALIA
Xeer Ilaaliyaha Guud ee dowladda Soomaaliya oo Gaaray Dalka Holland
Wefdi oo uu hogaaminayay Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr Axmed Cali Daahir oo ay kamid yihiin qareenada ay dowladda Soomaaliya u xilsaartay dacwada ku saabsan muranka soohdinta badda oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa gaaray dalka Holand oo ay ku taalo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ.
Mas’uuliyiinta maanta gaartay dalka Holland ayaa maalinta beri ah la filayaa in ay maxkamadda cadaaladda caalamka oo ku taala magaalada Hague ee dalka Netherlands waxaa ay u gudbin doonaan dukumentiyada ka harsan dacawaddaasi iyo cadeymaha muujinaya in badda ay sheeganayso dowladda Kenya ay Soomaaliya leedahay.
Kenya ayaa shirkado saliidda baara kula heshiisay in ay shidaal ka baaraan qeybo ka mid ah badda Soomaaliya oo ay Kenya sheeganeyso. inta badab shirkadihaas ayaa ka baxay heshiiskaas, ka dib markii ay ka war heleen in Soomaaliya ay dacwad u gudbisay Maxkamadda Cadaaladda ee Caalamiga ah hase ahaatee waxaa hohlihii shidaal baarista wadda hal shirkad oo laga leeyahay dalka Talyaaniga.
Xoghayihii degmada Kaxda iyo labo ka tirsan Ilaaladiisa oo lagu dilay Muqdisho